RSS ဆိုတာဘာလဲ Feed ဆိုတာဘာလဲ? ချန်နယ်ဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone
RSS ဆိုတာဘာလဲ Feed ဆိုတာဘာလဲ? ချန်နယ်ဆိုတာဘာလဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 25, 2007 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
လူသားများက HTML ကိုကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း software ပလက်ဖောင်းများကအကြောင်းအရာများကိုစားသုံးရန်အတွက်၎င်းသည်ဖတ်နိုင်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်ရမည်။ ပုံမှန်အွန်လိုင်းပုံစံဖြစ်သည် RSS ကို နောက်ဆုံးပုံစံကိုဒီပုံစံနဲ့ထုတ်တဲ့အခါမင်းကမင်းကိုခေါ်မယ် အစာ။ WordPress ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြင့်သင်၏ feed ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ပေးပြီးသင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။
သင့်ဆိုဒ်၏ဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအကြောင်းအရာကိုအခြားဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့ပို့ရုံသာပြုနိုင်သည်ဟုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် RSS ကိုတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လူအများစုက RSS ဟူသောဝေါဟာရကိုဆိုလိုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် တကယ်ပဲရိုးရှင်းစွာ Syndication ဒါပေမယ့်မူလကရေးသားခဲ့သည် ကြွယ်ဝသောဆိုဒ်အကျဉ်းချုပ်... နှင့်မူလ RDF ဆိုက်အကျဉ်းချုပ်.
RSS ကိုကွန်ရက်အခြေပြုစာရွက်စာတမ်းတစ်ခု (ပုံမှန်အားဖြင့်aလို့ခေါ်တယ်) အစာ or ဝဘ်ဆိုက်) အရင်းအမြစ်မှထုတ်ဝေသည် - ဟုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် ရုပ်သံလိုင်း။ ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲနှင့်စာရေးသူ၏အမည်စသည့်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်အကျဉ်းချုပ်စာသားများနှင့် metadata များပါဝင်သည်။
ဤသည်မှာ TechNewsDaily ရှိရိုးရှင်းသူများ၏သုံးစွဲသူများမှအမှန်တကယ်ရိုးရှင်းသောစုစည်းမှု (RSS) ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမည်သို့ရနိုင်သည်ကိုရှင်းပြသည့်ဗီဒီယိုတိုဖြစ်သည်။
RSS feeds ကို Feedly လိုမျိုးပလက်ဖောင်းများနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ဖတ်ချင်သောလိုင်းများကိုမကြာခဏဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Feed Reader သည်အသစ်သောအကြောင်းအရာများရှိသည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့အား ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုဘဲဖတ်ရှုနိုင်သည်။ feeds တွေကိုအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာစုစည်းဖော်ပြဖို့အသုံးပြုနိုင်တယ် DK New Media site ကို နှင့် Corporate Blogging သိကောင်းစရာများ), သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများ သုံး၍ သင်၏လူမှုမီဒီယာလိုင်းများကိုကျွေးမွေးရန်သုံးနိုင်သည် Feedpress ပါ, bufferဒါမှမဟုတ် TwitterFeed.
အိုး - မမေ့ပါနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ RSS Feed ကိုစာရင်းသွင်းပါ!
Tags: rdf site ကိုအကျဉ်းချုပ်ကြွယ်ဝသော site ကိုအကျဉ်းချုပ်RSS ကိုrss feed ကိုRSS ဆိုတာဘာလဲချန်နယ်ဆိုတာဘာလဲအစာကဘာလဲfeed channel ဆိုတာဘာလဲတစ် ဦး rdf site ကိုအကျဉ်းချုပ်ကဘာလဲကြွယ်ဝသော site ကိုအကျဉ်းချုပ်ကဘာလဲဝဘ်ဆိုက်ဘာလဲrss channel ဆိုတာဘာလဲတကယ်ရိုးရှင်းတဲ့စုစည်းမှုကဘာလဲRSS ဆိုတာဘာလဲ
Web Design စစ်တမ်းအပြင်အခြားစာရင်း
အဲဒီမှာ Doug ။ ငါတကယ်နားလည်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခု !! ငါတစ်ဝက်ယုံကြည်တယ်ပေါ့
Woohoo! ခရစ္စတင်းအရမ်းစိတ်ရှည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စာမူများနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာများပိုပိုရလေ့ရှိသည်။ ငါထင်တာကနှေးကွေးပြီးတချို့လူတွေကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ကူညီရမယ့်အချိန်ပဲ။
သငျသညျဤပစ္စည်းပစ္စယအတွက် mired geek နေတဲ့အခါ, သင်ကပြောနေတာအကြောင်းကိုအခြားလူတိုင်းသိတယ်မှတ်မိဖို့ခဲယဉ်း!
RSS ပေါ်ရှိနောက်ဆုံးမှတ်စု။ ဆောင်းပါးပါစကားလုံးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုဤစာမျက်နှာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအခြားအပိုပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ RSS post တွင်၎င်းသည်ဤအကြောင်းအရာနှင့်တူသည်။
ကျွန်ုပ်၏ရှည်လျားသောစာရင်းပြုစုရမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာဒေါက်ဂလပ်စ်အားဘာကို RSS အမှန်တကယ်ရှင်းပြသည်ကိုအနည်းငယ်ရေးခိုင်းရန်ဖြစ်သည် is.
ကြောင်းကြိုတင် - သုတ်သင်သပိတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ။ (နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ကဏ္ new သစ်တစ်ခုအတွက်လှုံဆော်ခြင်း😉)
နောက်တဖန်သင်ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း၏စာအုပ်ထဲတွင်ထပ်မံဖတ်ရှုခြင်းနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ရှိရသောအခါမည်သည့်ကွန်ပျူတာခေါင်းစဉ်ကိုသတိရလိမ့်မည်ကိုသင်ယခုစဉ်းစားမိပြီဖြစ်သည်။